भारतले नेपालको सिमा मिचेको विषयमा वर्षौ देखि कराईरहे तर मेरो आवाज कसैले सुनेनन् Canada Nepal
भारतले नेपालको सिमा मिचेको विषयमा वर्षौ देखि कराईरहे तर मेरो आवाज कसैले सुनेनन्
काठमाडौ । लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको करिब ३ सय ७२ वर्ग किलोमिटरभन्दा बढी नेपाली भूभाग समेटेर भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा विरोध चलिरहेको छ । ग्रेटर नेपालका फणिन्द्र नेपाल पनि अहिले सडकमा ओर्लिएका छन् ।
फणिन्द्र नेपाल जो दशकौ देखि भारतले नेपालको मिचेको भूमि विरुद्द चर्को आलोचना गरिरहेका छन् । फणिन्द्र नेपाल सयौ पटक जेल सम्म परिसकेका छन् तर उनको अभियान र आवाजलाई जनताले खासै चासो देखाएनन् जसका कारण फणिन्द्र नेपाल अहिले एक्लै लडिरहेका छन् । तर अहिले जब भारतले नेपालको भूमि राखेर आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्यो, नेपालीहरु अहिले सडकमा ओर्लिएका छन् र फणिन्द्र नेपालको वर्षौ देखिको अभियानलाई आत्मसाथ गरेका छन् ।
"मैले वर्षौ देखि चर्को स्वरमा कराईरहेको छु तर भारत विरुद्द मलाई कसैले साथ दिएनन् बरु उल्टै पन्छिएर हिँडे । भारतले हाम्रो भूमि मिचेको कुरा पुरानो हो तर कसैले मेरो कुरालाई चासो दिएनन् । म एक्लै कराईरहे, जेल गए र कयौ धम्किहरु सहे तर कोहि मेरो साथ आएनन् । तर ढिलो नै सहि मैले उठाएको मुद्दा बल्ल जनताले बुझे र सडकमा ओर्लिएका छन् । हामी सडकमा नओर्लिए सम्म सरकारले यो विषयलाई चासो दिदैन ।"
कार्तिक २३, २०७६ शनिवार १६:१७:०० बजे : प्रकाशित
आश्विन २१, २०७७ बुधवार २०:४९:०९ बजे : प्रकाशित
# मिलन नेवार
श्रावण २७, २०७७ मंगलवार ०१:३९:०० बजे : प्रकाशित
विप्लवसँगकाे अन्तर्वार्ता : प्रधानमन्त्री कार्यालयको जग्गा बेचेर खाने मान्छेहरूको हातमा देश छ
२५ औँ जनयुद्ध दिवस कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ ?
नेकपाका नेता–कार्यकर्ताहरूले अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ ?
फाल्गुण १, २०७६ बिहिवार १०:४४:०० बजे : प्रकाशित
पूर्वमन्त्रि लालबाबु पण्डितको यसरी बित्दैछ दिनचर्या
काठमाडौ । पूर्व सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितको अहिलेको दिनचर्या सामान्य रहेको छ । श्रीमती र एक छोरीसंग डेरामा बस्दै आएका पण्डित अहिले घर कै काममा व्यस्त रहेका छन् ।
पूर्वमन्त्रि लालबाबु पण्डित र श्रीमती बिमला महत पण्डितलाई कोटेश्वर स्थित डेरामा घाम ताप्दै गरेको बेला भेटिएका थिए । लालबाबु पण्डित अहिले मन्त्रि पदबाट हटाईए पश्चात प्राय घर कै काममा व्यस्त हुने गरेको बताएका छन् । पार्टीको कामहरु हुँदा पार्टी कार्यालयमा जाने वा कार्यक्रममा जाने गरेको श्रीमती पण्डितले श्रीमानको समय तालिका उल्लेख गरेकी छिन् । पार्टीको छलफलमा निम्तो आउँदा जाने गरेको नत्र घर मै अध्ययन गर्दै दिन चर्या बिताउने गरेको श्रीमतीको जिकिर छ ।
लालबाबु पण्डित र बिमला महत पण्डितले आफ्नो विवाह र सम्बन्धको विषयमा फुर्सदमा खुलेर बताएका छन् । सामान्य जीवन बिताएको र कुनै ठुलो सपना नरहेकोले यी दुईको विवाह देखि माया प्रेममा राजनीतिले रंगिएको छ । अहिले कलाकारहरु बीच बढ्दै गएको डिभोर्स बारे पण्डित दम्पतिले आफ्नो धारणा समेत सुनाएका छन् । विवाह र सम्बन्ध भनेको धेरै धैर्य गर्नुपर्ने हुँदा अहिलेको पिडि आफ्नो स्वार्थलाई सम्बन्ध जोड्ने देखि तोड्ने गरेकाले अहिले डिभोर्स बढ्दो गरेको पण्डित दम्पतिको बुझाई रहेको छ ।
पौष २७, २०७६ आइतवार २३:३२:०० बजे : प्रकाशित
श्रीमतीलाई कसले धेरै मन्त्रि बनाए भन्दै कांग्रेस र नेकपाका नेता बीच पोल खोलाखोल
काठमाडौ । नेकपाका नेता तथा सांसद डा. सुर्य पाठक र नेपाली कांग्रेसका नेता रामहरि खतिवडा बीच सरकारको काम कार्यलाई लिएर बहस गरेका छन् ।
क्यानाडा नेपालको स्टुडियोमा यी दुई नेताहरुले सरकारले सिमानाको विषयमा कसरी समाधान गर्ने बाटो रोजेको छ र किन चुकेको छ भन्ने मूल विषयमा केन्द्रित भएर बहस गरेका छन् । रामहरि खतिवडाले सरकारको काम कार्यले गति लिएन भन्दै आलोचना गरे भने डा. पाठकले सरकारले वाधा अवरोधहरु बीच कामलाई तिब्र रुपमा लिएर गएको भन्ने उल्लेख गरेका छन् । डा. पाठकका अनुसार सरकारले सिमानाको सुरक्षा गर्ने भन्दै बन्दुक बोकेर सेना पठाउने होईन बरु कुटनीतिक तरिकाले कुरा अघि बढेको भन्दै सिमानाको विषयमा प्रष्टाएका छन् ।
नेपाली राजनीतिमा नेता र मन्त्रीका श्रीमतीहरुलाई पनि सांसद देखि मन्त्रि बनाउने परम्पराको विषयमा पनि यी दुई नेता बीच चर्काचर्की परेको छ । डा. पाठकका अनुसार नेकपाले सधै राजनीति र सरकारमा महिलाको सहभागितालाई प्राथमिकता दिने तर्क दिएका छन् भने रामहरि खतिवडाको तर्क अनुसार कांग्रेसले मन्त्रीको श्रीमतीलाई भन्दै सक्षम महिलालाई राजनीतिमा मौका दिने गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
पौष ७, २०७६ सोमवार ११:३५:०० बजे : प्रकाशित
भुवन केसी र जिया केसीको प्रेम खुल्दै, जिया लाई लिएर उडे जापान तर्फ (भिडियो)
मंसिर ३, २०७६ मंगलवार २०:३२:०० बजे : प्रकाशित